I-Boston College Admissions: I-GPA, izikolo ze-SAT & UMTHETHO WABAKOLO
Izibalo zeeKotishi zeeKholeji zeBoston
Funda ngeKholeji yaseBoston kunye ne-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Scores Uzakufuna ukungena
Ngomlinganiselo wokwamkelwa kweepesenti ezingama-31, i-Boston College iyinyuvesi ekhethileyo. Abafundi baya kufuna amandla amaninzi okuza kuvunywa: amabanga aphakamileyo kwizifundo ezinzima, amanqaku afanelekileyo okuvavanya, kunye nokubandakanyeka kokubambisana kwangaphandle. Amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO ayadingeka njengenxalenye yesicelo. Ikholeji yaseBoston, njengamakhulu eminye imibutho ekhethiweyo, isebenzisa isicelo esiqhelekileyo .
Kutheni Unokukhetha Iklasi yaseBoston
I-Boston College iyunivesithi yangasese e-Chestnut Hill, ummandla waseBoston ngokufikelela lula kwesi sixeko. Ummandla uya ekhaya kwezinye iikholeji kunye neeyunivesithi . Ikholeji yaseBoston yasungulwa ngo-1863 ngabaYesuitshi. Namhlanje ngenye yeyunivesithi endala ye-Jesuit e-US, kunye neyunivesithi yaseJesuit eneyona nto inkulu. I-campus enhle iyaziwa ngumbuso wayo okhangayo wamaGothi, kwaye ikholeji inobambiswano kunye neSt. Ignatius Church.
Isikolo sihlala sibeka phezulu kwii-universities. Inkqubo yeshishini lokufunda isikolo ixhomekeke ngakumbi. I-BC nayo inesahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla alo kwezobugcisa be-liberal. Ngaphambili kwezemidlalo, iBoston College Eagles incintisana kwiCandelo le-NCAA 1 Inkomfa ye-Atlantic Coast . Amandla amaninzi ekholeji ayenayo indawo kwiinkalo zethu zeekholeji zaseMassachusetts kunye neikholeji zaseNew England eziphezulu .
I-Boston College GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Boston College i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Jonga i-graph time-time kwaye ubale amathuba akho okungena kwiCappex. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions ye-Boston College:
Njengenye yeyunivesithi ephezulu yamaKatolika, i-Boston College ikosa iileta ezikhanyelayo kakhulu kunokuba ziyamkela. Kwigrafu ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza awamkela abafundi, kwaye uyabona ukuba abaninzi abafundi abafika kwi-BC babenomlinganiselo we-A okanye ngaphezulu, izikolo ze-SAT (RW + M) ngaphaya kwe-1250, kunye nama-composite scores angaphezulu kwama-26. Abafundi abane "imilinganiselo" kunye nama-SAT amanqaku angaphezu kwe-1400 banokungeniswa. Qaphela ukuba phakathi kwabafundi abanomqolo ophakathi kwamanqaku amaninzi abomvu abafihliweyo phantsi kwebala eliluhlaza kunye nohlaza. Abafundi abaninzi abanamanani kunye namabakala okujoliswe kuzo kwiBhoksi yaseBoston bafumana iincwadi zokulahlwa. Ngexesha elifanayo, gcinani engqondweni ukuba i-Boston College ayinayo ibakala elincinci okanye iimfuno zamanqaku okuvavanya ukungena - bonke abafundi abafaka izicelo baya kufumana ingqalelo ngokucokisekileyo.
Ikholeji yaseBoston, efana nayo yonke iikholeji ezikhethileyo kunye neyunivesithi, iyakwamkelwa ngokubanzi-abantu abamkelwayo bajonga bonke abafake izicelo, kungekhona nje amanyathelo amanani afana namabanga, isikhundla, kunye nee-SAT izikolo. Enye yezona zinto zibalulekileyo kwi-application yokuphumelela akukhona nje ngamabanga aphakamileyo, kodwa amanqaku aphakamileyo kwizifundo ezinzima. Ikholeji yaseBoston ithanda ukubona abafundi abaneminyaka emine yezibalo, isayensi yoluntu, ulwimi lwangaphandle, isayensi kunye nesiNgesi. Ukuba isikolo sakho esiphakamileyo sinikeza i-AP, IB, okanye iikhosi ze-Honors, abantu abavumile bayakufuna ukubona ukuba uzithintele ngokuthatha ezo zifundo. Ininzi yezicelo eziphumeleleyo kwiKholeji yaseBoston zivela kubafundi ababala kwi-10% ephezulu yeklasi yabo yokugqiba.
Ukuqhubela phambili ukwandisa amathuba okufumana iKholeji yaseBoston, gxininisa ekubeni neengqinamba ezinqobayo , ii- letters ezinamandla zinconywa kunye nemisebenzi enomdla. Njengamakholeji aphezulu amaninzi, iKholeji yaseBoston isebenzisa isicelo esiqhelekileyo, kodwa uya kufuna ukwenza okungakumbi kunokuthumela isicelo "esivamile". Ikholeji idinga i-400-word okanye ibhaliso elifutshane lokubhala ngokubhekisele kwisicatshulwa esisisigxina sesicelo; Qinisekisa ukuba ubeka ixesha kunye nokunyamekela incoko eyongezelelweyo ukuba ubonise ukuba unomdla kwaye unomdla wokuya kwi-BC.
Abafundi abanolwazi oluthile okanye abanolwazi oluqinileyo ukuba baxelele baya kukhangeleka ukuba ngaba amabala kunye neemvavanyo zokuvavanya azinakwenzeka. Njengesiqendu se-NCAA isikolo kunye nelungu leNkomfa ye-Atlantic Coast (i-ACC), iKholeji yaseBoston iya kukhangela ngentshiseko i-scholar / athlete abanamandla.
Qaphela ukuba udliwano-ndlebe aluyiyo inxalenye yesicelo senkqubo ye-College yaseBoston.
Abafundi abanomdla kwi-studio yobugcisa, umculo okanye i-theatre bangasebenzisa Igumbi leSilayidi ukuze balayishe iifayile zobugcisa babo obubonakalayo okanye obwenzayo. Abafakizicelo bayamkeleka ukuba basebenzise icandelo "Ulwazi olongezelelweyo" lweSicelo esisodwa ukubonisa ingqalelo kwizakhono zobugcisa ezingabonakali kwenye indawo kwisicelo.
Isilinganiso sokwamkelwa kweekholeji yaseBoston: 31%
ISAT Math: 640/740
UMTHETHO UMathe: 28/33
Ngaphezulu Ulwazi lweKholeji yaseBoston
Isigqibo sakho sokufaka isicelo kwiKholeji yaseBoston iya kuqwalasela izinto ezininzi ngaphandle kwemigangatho yokwamkelwa. Uza kubona ukuba abafundi abafanelekayo ukufumana uncedo lwezemali bafumana ama-grants aphezulu avela kwi-BC. Kananjalo, ukugcinwa kwempilo eyunivesithi kunye neerhafu zokugqwesa iziqu kukubonisa iinkqubo zemfundo ezenza umsebenzi obalaseleyo ukulungiselela abafundi ukuba baphumelele.
Ubhaliso lwabonke: 14,466 (i-9,870 izifundo eziphantsi)
Imfundo kunye neMali: $ 51,296
Igumbi neBhodi: $ 13,818
Ezinye iindleko: $ 1,700
Iindleko ezipheleleyo: $ 68,064
I-Boston College Financial Aid (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 53%
Izibonelelo: $ 38,399
Imali: $ 4,027
I-Popular Majors: I- Biology, Izifundo zoNxibelelwano, i-Economics, isiNgesi, iMali, iMbali, ukuThengisa, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology
Ukukhutshwa kwezinga: 5%
Ireyithi yokuQiniswa kweNyaka eyi-4: 89%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 93%
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola, iBhola yeBhola, iLizwe eliPhambukayo, Izabi, Ibhola, iGalofu, iHockey iHockey, i-Sailing, i-Skiing, i-Soccer, Ukubhukuda, kunye neDiving, iTennis, i-Track & Field
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Basketball, Izwe eliphambeneyo, Ucingo, iHockey yeHlabathi, iGalofu, iHockey iHockey, iLacrosse, UkuKhupha, ukuSayela, ukuSuka, i-Soccer, i-Softball, Ukubhukuda nokuDoba, iThenti, i-Track and field, i-Volleyball
> Umthombo wolwazi: Igrafu esuka kuCapepex; zonke ezinye iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo
I-Oberlin College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
UmGrike uThixo u-Poseidon, uKumkani wolwandle